လွှမ်းမိုးသောခံစားမှု, ချီးမွမ်း, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှရာစုနှစ်တစ်ခုကဗျာဆရာတွေ, အရောင်ကမီးခိုးရောင်ရက်ပေးကြောင်းခံစားမှု။ ကအမည် ကိုချစ် ပေမယ့်မကြာခဏပြုလုပ်အသံစဉ်းစားတွေးခေါ်ပိတ်ဆို့ခြင်း, စိတ်ကို blurs ကြောင့်ပုံမှန်ပူးတွဲမှုနှင့်အတူရောထွေးနေသည်။ ဒီတော့အဘယျသို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ခံစားချက်၏ထောင်ချောက်ထဲသို့ကျဖို့မဘယ်လိုနေသလဲ?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့သောအသိ, အသက်ရှင်ခြင်း-ကတိသစ္စာပြုသည်။ ဒါဟာ၏အခြေခံ - က, အရှင်, မိမိအတ္တရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငြင်းပယ်, သင့်လက်တွဲဖော်, အနုမောဒနာပြုပြီး, သူ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကြီးကိုနားလည်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း, အတွေ့အကြုံများအပြည့်အဝယုံကြည်မှုပါပဲ။
မေတ္တာ, အလှည့်အတွက်, လူ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူဒဏ်ငွေထိတွေ့နှင့်အတူတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်အဖြစ်ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဤသည်၌အဓိကမောင်းနှင်အား - ဒါကြောင့်ထွက်နာကျင်အခြားအပေါ်မှီခို, အားအပိုင်ဆန္ဒ, သူ့အာရုံကိုနှင့်။
အပြင်ပန်းခြင်း, ချစ်ခြင်းနှင့်အရူးအမူးအကြားခြားနားချက်နီးပါးအဖွဲ့ဝင်များကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ antithesis တစ်အသိ, ပထမဦးဆုံး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဆွဲဆောင်ကြသောအခါဒါ, ကဒီမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်နှင့်အနီးကပ်မကျင့်။ အဲဒီပူးတွဲဖိုင်ကိုဒါအပေါ်အခြားသူတစ်ဦး, တစ်ဦးယောက်ျား၏ပုံများအတွက်လေးစား, သူ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, မျက်နှာ features တွေနှင့်တစ်ဦးအသည်းအသန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုလူတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်, ပြီးတော့ဒီခွေငျးငှါအနေဖြင့်သိသိမွေးရာပါစျြခွငျးမတ်ေတာသောကြောင်းအထဲကညွှန်ပြ N. ဒါ့အပြင်တန်ဖိုးရှိ မဖြစ်သကဲ့သို့အကျိုးစီးပွား။
မေတ္တာ၌အဘယ်သူမျှမချွန်ထက်စိတ်ခံစားမှုအတက်အကျရှိပါတယ်အဖြစ်။ ဒါဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းချောမွေ့ခံစားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာသူ့ဟာသူအတွက်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ယင်း၏မူရင်းရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ, ငါတို့မဆိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အကြောင်းပြောနေတာကြသည်မဟုတ်။ တစ်စုံတစ်ဦးမေတ္တာရှင်မီ, သငျသညျကိုအခြားသူများက, တန်ရာနှင့်အကုသိုလ်၏ဝေဖန်မှုများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်အပြစ်ရှိတယ်မလိုအပ်သောအကဲဖြတ်ပစ်, သင်၌နေသောသူအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံတတ်ရန်သင်ယူသင့်ပါတယ်တဲ့အမြင်ရှိပါတယ်။ အခြားတို့၏အသက်ဝိညာဉ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သငျသညျမကျြစိကို prying ထံမှဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်တွေ့နိုင်ပါသည်။
မတ်ေတာ၏စိတ်ပညာအံ့ဩဘွယ်သောသူ့စာအုပ်စိတ်ပညာရှင်နှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Erich Fromm "မေတ္တာရှင်၏အနုပညာ" တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ "မေတ္တာသည် - ဤလွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်ပါတယ်" - ဟုသူကဒီစကားရပ်ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်း။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘာမှပေမယ့်နာကျင်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များကိုမပေးပါဘူးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုနှင့်အတူရောယှက်နေသည်။ ဒီအကြားဆက်ဆံရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသောအပေါ်အခြေခံသည်။ အရှုံးနှင့်နာကျင်မှုများကြောက်လန့် - အဘယျသို့ကဒီခံစားချက်မှလာမယ့်လုပ်ပါ။
အဆိုပါချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြန်ဘာမျှမမေးခြင်း, သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအများကြီးပေးသည်။ မေတ္တာ၌, သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။
ပူးတွဲဆငျးရဲဒုက်ခပေမယ့်ဘာမျှမပါဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် - နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ဖို့အာဏာနှင့်လွတ်လပ်မှုကို။
မေတ္တာ၌မရှိရာအရပျရှိ egoism ဖို့ ။
ခေတ်မှီစကတ် - နွေရာသီ 2014
Minced အသား Hedgehog
Kim Kardashian ကမမျှော်လင့်ဘဲသူမရဲ့ကလေးတစ်ဦးအငှားမိခင်ပြောသော
ခရမ်းချဉ်သီး၏ Stam မျိုးပေါင်း
သူ Mike ဝါးတားပိုလို
ဒါကြောင့်ကြွယ်ဝသောအရသာများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်း - ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ပျိုးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စက်တင်ဘာ Elle အတွက်သူ Alicia Vikander: Lara Croft နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးနှင့်မယ့်
ရုရှားအာကာသတပ်ဖွဲ့များ: ထိပ်တန်း 10 တိကျတဲ့စွမ်းအင်အချက်များ
ခေါက်ဆွဲ shugaring - စာရွက်
Clerodendrum - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု
ဖိနပ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံး - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း